ठीक ढंगले काम गरेन भने सरकारबारे पार्टी स्वयमले पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ : झलनाथ खनाल (भिडियोसहित) | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
ठीक ढंगले काम गरेन भने सरकारबारे पार्टी स्वयमले पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ : झलनाथ खनाल (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०७६, बुधबार
काठमाडौं, २६ चैत्र । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बरिष्ठ तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफूहरुले पार्टीको सचिवालय बैठकमा देश र जनताको हितमा काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार अपरान्ह प्राईम टाईम्स टेलिजिभनबाट प्रशारण भएको कोरोनाको महामारी ः प्राइमको खबरदारी कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
हिजो बसेको सचिवालय बैठकमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएकोबारे कुरा भयो कि भएन भन्नेबारे खनालले यस्तो सुनाए,”हामीले उहाँले के भन्नुभयो, के भन्नुभएन ? भन्नुपर्दापनि उहाँले हेर्दैछु भन्नुभयो । अध्ययन गर्दैछु भन्नुभयो । नेकपा सबै प्रकारका भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दै आएको पार्टी हो । हामी सहन गर्न सक्दैनौं । गम्भिरतापूर्वक हेर्न आग्रह गरेका छौं । केही पनि भएको छैन भनेर भन्न सक्नुभएन । कतिपय कुरा मलाई पनि थाहा छैन् । सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि थाहा छैन भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले म अध्ययन गर्छु र अनियमितता भएको छ भने कारबाहीको विषय बनाउँछु भन्नुभयो । सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत छ । आम जनताको समर्थन छ । हामी सबै नेताले समर्थन गरेका छौं । सरकारले यो बेलामा राम्रो ढंगले काम गर्नुपर्छ । काम भएन भने पार्टी स्वयमले पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । पार्टीको ईच्छा र आकांक्षा बुझेर काम गनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यसको अगुवाई गर्नुपर्छ ।”
कोरोनाको महामारी प्राइमको खबरदारीलकडाउन १६औं दिन
Posted by Prime Times Television, Nepal on Wednesday, April 8, 2020
उनले विश्व नै कोरोको कहरमा परेको सुनाउँदै नेपाल सरकारले पनि आफ्नो काम प्रभावकारी रुपम अघि बढाउनुपर्ने सुझाए । उनले भने,”अहिले सिंगो राष्टको हितमा, जनताको हितमा, राष्टलाई अगाडि बढाउने, महामारीबाट यो राष्टलाई बचाउने काममा यो सरकारले महत्व्पूर्ण र प्रभावकारी भूकिामा खेल्न सक्नुपर्छ । हामीले पनि त्यही कुरा भनेका छौं । यसको लागि सरकारल राम्रो तयारी गर्न सकोस् । स्वास्थ्य सामग्री पारदर्शी ढंगले राम्रोसँग मगाईयोस । अहिलेपनि आवश्यक मात्रामा कोरोनाको परीक्षण भएको छैन् । सरकारले काम गर्न सकेन भने पार्टीले गम्भिर रुपमा सोच्छ नि ।”
तर, अहिले हाईपोथेसिसको आधारमा सरकारको विकल्प खोजिहाल्ने अवस्था नभएको पनि खनालको स्पष्टोक्ति छ । उनले भने,”अहिले त्यहाँसम्म पुग्ने अवस्था आईहालेको छैन् । तर, हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक भनिरहेका छौं कि बैठकहरु चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्छ भनेर माग गरेका हौं । मैले पनि माग गरेको हो । त्यसो भएको हुनाले बैठक भयो । राम्रो कुरा भयो । बैठकमा हामीले कमसेकम छलफल गर्ने मौका पायौं । प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने र सुझाव दिने मौका पायौं । त्यसले सरकारलाई अझ बलियो भएर प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न मद्दत पुग्नेछ । अझ लोकप्रिय ढंगले देश र जनताको हितमा काम गर्न बल पुगिरहेको छ । यो बललाई प्रधानमन्त्रीले सदूपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यो उहाँको कर्तव्य हो । त्यो कुरा त हामीले भविष्यमा उहाँको काम हेरेर मात्रै भन्न सक्छौं ।”
आफूहरुले स्वास्थ्य सामग्रीहरु चाँडोभन्दा चाँडो ल्याईयोस भनेर पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरिएको खनालले सुनाए । उनले भने,”हामीले स्वास्थ्य सामग्री चाँडो मगाईयोस भनेर प्रमलाई भनेका छौं । अझ प्रभावकारी रुपमा उपचार गर्न सकिने अवस्थामा सरकार लाग्नुपर्छ भनेका छौं । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गर्न सरकार सफल हुनुपर्छ । यो गर्न सकेमात्रै सरकारको औचित्य सावित हुन्छ । सरकारले राम्रा काम गर्नैपर्छ । सफल हुनैपर्छ । सिंगो पार्टीले साथ दिएको छ ।प्रतिपक्षले साथ दिएको छ । कुनैपनि मन्त्रीले अन्यथा ढंगले सोच्छन् भने अत्यन्तै गलत हुन्छ । हामी यो सरकारलाई सहयोग पनि गरिरहेका छौं । संगै, चेतावनी पनि दिईरहेका छौं ।”
मन्त्रीहरुले पार्टीको स्पिरिट अनुसार काम गर्न सकेनन र पार्टीको निर्देशनअनुसार सरकार चलेन भने पार्टीले सोच्नुपर्ने हुन्छ भन्दै खनालले कडा चेतावनी दिए । उनले थपे,”योभन्दा अघि पनि कतिपय मन्त्रीहरु तलमाथि भैसकेको तपाईहरुले देखिसक्नुभएको छ । पार्टीको हितमा काम गर्नुपर्यो । देशको हितमा काम गर्नुपर्छ । कोरोनाविरुद्ध लड्न सरकारले चालेको कदम राम्रै रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । विश्वभरि नै कोरोनाविरुद्ध लड्ने मुख्य हतियार भनेको नै लकडाउन भएकोले नेपालले पनि त्यही कदम चालेको उनको भनाई छ । उनले भने,”वर्तमान सरकार सफल भएको छ । औषधी, उपकरणहरु परिचालन गर्ने कुरामा सरकार प्रभावकारी हुनुपर्छ । जनतालाई पर्ने अपठ्यारामा सरकार त्यतिकै प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्नुपर्छ ।”
उनले सरकारले आगामी २०७७ साल बैशाख ३ गतेसम्म कायम गरेको लकडाउन अझै बढ्न सक्नेपनि टिप्पणी गरे । उनले भने,”लकडाउन नै कोरोनाविरुद्धको ठूलो औषधी हो । अहिले पनि कोरोनाको जोखिम र खतरा मडारिरहेको छ । भारतमा कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ , भारतमा पनि अझै लकडाउन लम्बियो भने नेपालले पनि अटोमेटिक लम्ब्याउनुपर्छ ।”
उनले विश्वका जुनसुकै देशमा रहेका नेपालीहरुलाई अहिलेको अवस्थालाई हेरेर जो जहाँ छन् त्यही बस्नसमेत आग्रह गरे । उनले भने,”तपाई बसेका ती देशहरु लकडाउनमा छन् । यो आदेशलाई अनुशरण गर्दै आफूलाई रक्षा गर्नुको विकल्प छैन् । भारतमा रहेका नेपालीहरु नेपाल आउन चाहन्छन् । उनीहरु आउने अवस्था छैन् । अलपत्र नपरुन भनेर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुराकानी गरिरहेको छ । युएई, साउदी अरबिया, कुवेतसँग प्रधानमन्त्रीले कुराकानी गर्नुभएको छ । अष्ट्रेलिया अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने कुरा आएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीले कुरा गर्नुभएको छ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा छ विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर
काठमाडौँ, २२ जेठ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १२ औँ र ११ औ तह (सहसचिव
नेपालमा ‘हिन्दुराष्ट्र’ का लागि ‘योगी कार्ड’ को प्रयोग होला ?
रिपोर्टर्स नेपाल, २२ जेठ । योगी आदित्यनाथको नेपालसँग निकै नजिकको सम्बन्ध छ । भारत उत्तर
२६३४ कोरोना भाइरसका संक्रमित को को (विवरणसहित)
काठमाडौ, २२ जेठ । आज एकै दिन किर्तिमानी ३३४ कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएपछि कुल संक्रमित
मन्त्रीपरिषद बैठक : नयाँ मोडालिटी तयार पार्ने उच्चस्तरीय समितिलाई जिम्मा
काठमाडौँ, २२जेठ : मन्त्रीपरिषद बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्न नयाँ मोडालिटी पेश गर्न उच्चस्तरीय समन्य समितिलाई
किसानलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं, २२ जेठ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले कोभिड–१९ का कारण
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पारित गर्यो वार्षिक प्रतिवेदन
काठमाडौं, २२ जेठ । सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेकोे छ
केपी ओलीले कालापानी फिर्ता गरे आजीवन ओलीको जुत्ता पालिस गरेर बस्छु : सिंह
काठमाडौं, २२ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डा. अमरेश कुमार
लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाइने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निष्कर्ष
काठमाडौँ, २२ जेठ : उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बन्दाबन्दीलाई थप प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालेको
काठमाडौं, २३ जेठ । आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल ज्येष्ठ २३ गते शुक्रबार इश्वी
कोरोना बीमा रोक्न बीमा समितिको निर्देशन
काठमाडौं, २२ जेठ । बीमा समितिले कोरोना बीमा रोक्न निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ
काठमाडौं, २२ जेठ । आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चलचित्र निर्देशक दयाराम दाहाललाई चलचित्र विकास